Luis Suarez oo maanta qalliin lagu sameynayo… (Meeqa Isbuuc ayuu garoomada ka maqnaan doonaa?) – Gool FM
(Barcelona) 12 Jan 2020. Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa maanta oo Axad ah waxa uu mari doonaa qalliin, waxaana la sii ogaaday mudada uu garoomada ka maqnaan doono.
Luis Suarez ayaa qalliin jilibka looga sameyn doonaa maanta, waxaana la sheegayaa inuu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan muddo bil ah.
Dhaliyaha reer Uruguay ayaa gaaray Isbitaal ku yaala magaalada Barcelona, halkaasoo uu qallinka ku mari doono.
Dr. Ramon Cugat oo ka socda Barcelona ayaa ka qeyb qaadan doona qallinka Luis Suarez, waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaado ugu yaraan lix isbuuc.
Suarez ayaa marka qalliinka lagu sameeyo seegi doona lix kulan oo horyaalka La Liga ah, Copa del Rey, iyadoo ujeedku yahay inay dib ugu soo laabato kulanka wareegga 16-ka Champions League ee ay la leeyihiin Napoli.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay Barcelona ayaa la soo saxiixatay Kevin-Prince Boateng intii lagu guda jiray suuqii jiilaalka, laakiin waxba kama qaban kooxda, Barca ayaana ku qasbanaan doonta inay la soo saxiixato Weeraryahan u buuxiya booska Suarez oo qalliin maraya.
Neymar ayaa la la xiriirinayaa inuu dib ugu soo laaban doono garoonka Camp Nou, balse kooxda Barcelona ayaysan u badnayn inay soo qaadato xiddigan reer Brazil suuqa bishaan Janaayo.